फेसनकै लागि भनेर खर्च गर्दिन : बाबु बाेगटी
#सफल उद्यमी महिला :
Friday,28 February, 2020 | शुक्रबार, १६ फागुन, २०७६
जीवनशैली कला / साहित्य
शिलापत्र संवाददाता काठमाडाैं, २४ असार
‘सान्नानी हिर्काउँला लौरी’ले गीतबाट बाबु बोगटी चर्चाको शिखरमा पुगे । बोगटीका दर्जनौं गीत लोकप्रिय छन् । उनी नायक पनि हुन् । उनी ‘बाटोमुनिको फूल’, ‘देश खोज्दै जाँदा’ र ‘भाले जुधाइ’ चलचित्रमा मुख्य भूमिका थिए ।
उनी नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको फेसनेबल गायक रुपमा पनि चिनिन्छन् । उनै बाबु बोगटीसँग शिलापत्रकर्मी पवन बराइलीले गरेको फेसन संवाद :
फेसनमा कतिको ध्यान दिनुहुन्छ ?
मलाई सफा हुनुपर्छ, जुन पनि फिट लाग्छ । बजारमा कुन फेसन आयो भनेर म फलो गर्दिनँ । दैनिक जीवनमा त्यति धेरै फेसनेबल हुन्नँ । तर, कुनै अवार्ड कार्यक्रममा जनुपर्याे भने कलर म्याचिङ पहिरन लगाउँछु । राम्रो क्वालिटीको कपडा लगाउँछु ।
फेसन के हो ?
फेसनले मान्छेको व्यक्तित्व झल्काउँछ । उसले गरेको फेसनले व्यक्तिलाई चिनाउँछ । फेसनको स्वभावलाई पनि झल्काउँछ । फेसनले मान्छेको इप्रेसनलाई प्रभाव पार्छ । एक हिसाबले बाहिरी आवरण पनि हो । र, फेसनको महत्त्व पनि छ त्यसैले दैनिक यसले मान्छेले सुहाउँदो फेसन गर्नुपर्छ ।
कहिलेदेखि फेसनेबल हुनुभयो ?
गाउँले परिवेशमा हुर्किएको मान्छे, फेसनसम्बन्धी त्यति ज्ञान थिएन । त्यतिबेला कपडा लगाउन मात्रै पाए हुन्थ्यो । म फेसनमा त्यति ध्यान नदिने मान्छे पनि हुँ । पब्लिक फिगर भएपछि हजारौं दर्शकको बीचमा उभिनुपर्छ । र, सयौं क्यामराले फलो गर्छन् । क्यामरामा देखिँदा पनि कस्तो कपडा लगाएको भन्ने खालाको टिप्पणी हुन्छ त्यसैले अरुका लागि पनि पहिरनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
अरूको नजरमा वा समाजका लागि पनि टिपटप बन्नुपर्ने हुन्छ । पब्लिक फिगर भएपछि फेसनमा सेन्सेटिभ भएको हो ।
फेसनकै लागि भनेर कतिको खर्च हुन्छ ?
म कपडामा त्यति ब्रान्ड कन्सियस छैन । आफूसँग भएको कपडालाई मिलाएर लगाउँछु । म एकदम धेरै सपिङ गर्न जाने वा फेसनकै लागि भनेर बढी खर्च गर्दिनँ । जुन चीज आवश्यक पर्छ, त्यही किन्छु त्यसैले फेसनमा बढी खर्च हुँदैन ।
मन पर्ने कलर नि ?
मेरो मन पर्ने कलर डार्क ब्लु र प्लेन हो । प्रायः टिसर्टहरु किन्छु । मिक्स कलरहरु त्यति मन पर्दैन । पाइन्ट, सर्ट र टिसर्ट प्लेनमा किन्छु । त्यसमा आफूलाई म्याचिङ भएको जस्तो लाग्छ ।
भ्रमण जाँदा कस्ता फेसन गर्नुहुन्छ ?
क्लाइमेट हेरेर सपिङ गर्छु । जाडो मौसमा छ भने त्यहीअनुसारको ड्रेस अफ गर्छु । गर्मीमा जिन्स पाइन्ट र टिसर्ट कन्फर्ट लाग्छ । जिन्स प्यान्ट र टिसर्टमा अफूलाई ह्यान्डसम लाग्छ ।
कपडाको पाइन्ट कहिल्यै लगाउँदिनँ । सुट मात्रै लगाउनुपर्याे भन्यो मात्रै । नत्र कपडाको लाउन मन लाग्दैन । अहिले हाफ पेन्ट र टिसर्ट नै लगाउँछु ।
सपिङ सेन्टर ?
नियमित सपिङ गर्ने सपिङ सेन्टर छैन । तर, राम्रो ठाउँमा जान्छु । राम्रो ठाउँमा पैसा बढी गए पनि क्वालिटीका कपडा पाइन्छन् । पछिल्लो समयचाहिँ अलि ब्रान्ड हेर्छु, वर्षमा एउटा लगाउँछु भन्ने चाहना बढेको छ । दुई–चार पैसा बढी पैसा तिर्ने । ब्रान्डको फाइदा जुन चीजको पनि आयु बढी हुनेरहेछ त्यसैले ब्रान्डेट नै लगाउन थालेको छु ।
सेलिब्रेटीलाई बार्गेनिङ गर्न पनि गाह्रो हुन्छ होला नि ?
पहिले संर्घषको जीवनमा बर्गेनिङ गर्थें । अहिले त्यति बार्गेनिङ गर्दिनँ । विदेशतिर गएँ भने सेल लागेको ठाउँमा जान्छु । विदेशमा बार्गेनिङ गर्न मिल्दैन । नेपालमा ब्रान्डेट सपिङ सेन्टरमा बार्गेनिङ गर्न मिल्दैन । त्यसमा मार्जिन ठिक्क राखेको हुन्छ । वल्र्डवाइड एउटै मूल्य हुन्छ ।
घडी र चस्मा कुन ब्रान्डका छन् ?
म पहिले घडीको सोखिन व्यक्ति हुँ । एलिसिस र रोलेक्स ब्रान्डको छ । चस्मा रेबन मात्रै प्रयोग गर्छु । रेबन राम्रो लाग्छ, । अरु प्रयोग गरेको छैन ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २५, २०७६, ०१:२४:००
राष्ट्रपतिद्वारा धनगढीमा विश्व नेपाली साहित्य महोत्सवको उद्घाटन
दूध र जुसजस्तै प्राकृतिक हुन्छ बियर, यी हुन् पिउँदाका ९ फाइदा
आर्ट ग्यालरीमा शिवानीका चित्र
पार्टी भनेको गडगडाउने खोलाजस्तो हुनुपर्छ : प्रचण्ड
डीआईजी लम्साल, पाल र थापा एआईजीमा सिफारिस
मेरो नाममा उजुरी हालेको छ भने त्यो भ्रष्ट उजुरी हो : प्रधानमन्त्री
डडेल्धुरामा ढिस्कोले पुरिएर १ जनाको मृत्यु, ४ घाइते
३० हजार घूससहित प्रधानाध्यापक पक्राउ
ओली–प्रचण्ड ५ घण्टा एउटै मञ्चमा, एक शब्द बोलेनन्
१७ जना व्यक्ति काे को थिए, जसले नेपाली नोटमा हस्ताक्षर गरे ?
कञ्चनपुरमा घरभित्रै मृत भेटिए दम्पती, हत्या आशंका
अनि भरिएन सिउँदो
पोखरामा सवारी दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु
पेस्तोल देखाउँदै टिकटक बनाउने सई तानिए महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा
बर्दीमा पेस्तोल नचाउँदै टिकटक भिडियो पोस्ट, प्रहरी बेखबर
सीपी मैनाली चढेको कार दुर्घटना, अवस्था गम्भीर
दुई तिहाइको मारमा एमसीसी
परपुरुषसँगको सम्बन्धले १ करोड स्वाहा !
दिल्लीमा त्यसपछि सुरू भयो मारामार.. (ग्राउण्ड रिपोर्ट)
गौतमकाे 'इन्ट्री'सँगै अर्थमन्त्री खतिवडा आउट !
पाटनमा प्रत्येक ५ वर्षमा हुने सम्यक महादान पर्व सुरु
खाेकनामा खुलेकाे संस्कृति